Seranam-piaramanidina Ravinala-Nosy Be : apetraka izao ny tara vaovao 20.000 t manolo ny efa vaky | NewsMada
Seranam-piaramanidina Ravinala-Nosy Be : apetraka izao ny tara vaovao 20.000 t manolo ny efa vaky
Par Taratra sur 26/09/2017
Toy ny eo Ivato, mandeha ny asa fanamboaranana seranam-piaramanidina vaovao any Nosy Be, ataon’ny Ravinala Airports, hitantana izany seranana izany. Miara-manatanteraka izany asa lehibe izany ny Colas sy ny Bouygues Bâtiment International.
15 tapitrisa euros ny vola lanina amin’ny fanaovana ny asa rehetra, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, takin’ny vanim-potoana ankehitriny. Hatramin’izao, mifanaraka amin’ny tetiandro nofaritana ny fizotran’ny asa. Manomboka amin’ity herinandro ity ny fametrahana lafika tara vaovao 20.000 t manolo ny efa vaky teo aloha. Havaozina tanteraka ihany koa ny toby fitahirizan-tsolika, miaraka amin’ny toby fanadiovana rano, ho vita amin’ny volana novambra ho avy izao.
Dingana manaraka ny fanarenana ny fiantsonana efa nisy teo aloha, hahazoana malalaka mandray fiaramanidina amin’ny fotoana rehetra. Ety ivelany, hanamboarana toerana azo handraisana fiarakodia 140. Tombanana ho vita tanteraka amin’ny volana aogositra 2018 ny asa rehetra. Tsy manakorontana ny fiasan’ny seranana amin’izao fotoana izao anefa izany rehetra izany, noho ny fisian’ny ekipa, ahitana olona 170, miasa mandritra ny alina. Nomena fiofanana teknika mifanaraka amin’izay atao ny mpiasa rehetra, tahaka ny atao eo Ivato. Voalaza mialoha amin’izay atao rehetra ireo fiaramanidina tonga eny an-toerana, ho fisorohana ny loza.
Hanome tosika ny sehatry ny fizahantany ny fahavitan’izany fotodrafitrasa vaovao izany any Nosy Be, misokatra bebe kokoa ho an’ny hafa sy hampitombo ny zotram-piaramanidina. Mandeha izany io asa vaovao ho an’ny seranam-piaramanidina io, fa tokony hisy fanamboarana sy fanitarana koa ny seranan-tsambo.